'Addis Wag': 'Miidiyaalen heddu walitti bu'iinsa irratti xiyyeefachuun gabaasu' - BBC News Afaan Oromoo
'Addis Wag': 'Miidiyaalen heddu walitti bu'iinsa irratti xiyyeefachuun gabaasu'
Yaadaafi ilaalchawwan walitti fiduuf gahee miidiyaalen qabanirratti mariin Waajjira Ministira Mummeetiin qophaa'ee adeemsifamaa jira.
Mariin maqaa 'Addis Wag' jedhamun beekkamuufi Waajjira Ministira Mummeen qophaa'u kun kanaan dura olaantummaa seeraa, ijaarsa sirna dimokiraasii fi dhimmoota biroo irratti xiyyeeffachuun adeemsifamaa ture.
Marii har'aa irrattis gaazexeesitoonni miidiyaalee garaagaraa irraa dhufan, akkasumas dhaabbilee akka Abbaa Taayitaa Birodkaastii, Yunivarsiitii Finfinneefi dhaabbilee mootummaa garaagaraa irraa dhufan gahee miidiyaalen garaagarummaa yaadaa dhiphisuu irratti qaban ilaalchisuun mari'achaa jiru.
Maricha kan eegalsiisan Dubbi Himaan Waajjira Ministira Mummee Obbo Nugusuu Xilaahun waa'ee barbaachisummaa mariifi waliin dubbii dubbatan.
"Barmaatin waliin dubbachuufi mari'achuu guddachuu qaba. Yeroo kanattis baay'ee nu barbaachisa," kan jedhan Obbo Nugusuun "miidiyaan yaadawwaniifi ilaalchawwan faallaa biyyattii keessa jiran gama walitti fiduutiin gahee olaanaa qaba," jedhan.
Marii barsiisotaafi 'Puush Aappii' Dr. Abiy
"Seenaa Itoophiyaa, rakkoolee keenya, gootota irratti akkasumas alaabaa keenya irrattillee garaagarummaan ilaalchaa jiru olaanaa dha" jechuunis himan.
Kanaafu miidiyaalen yaadawwan burqisiisun ilaalchawwan walirraa fagoo jiran kunnen akka araaramanif hojjechuu akka qabu dubbatan.
"Kanaafis miidiyaalen ciminaaf hanqinoota isaani adda baasun cimina qaban cimsuu fi hanqinoota jiran fooyyessun gahee yaadawwan faallaa gama walitti fiduutin irraa eeggamu akka bahatan gochuu qabna" jechuunis himan.
Haala miidiyaalee biyya Itoophiyaa irratti waraqaa qo'annoo kan dhiyeessan Dooktar Mulaatuu Alamaayyoo uwwisaafi qabiyyee miidiyaalee, akkasumas dhiibbaawwan kallattii garaagaraan miidiyaalee irratti taasifamaa jiran ilaalchisuun dubbatan.
Haala damee miidiyaa Itoophiyaa waggoota darbanii yeroo himanis "bara faranjootaa 2010 hanga 2012tti dhiibbaan mootummaan miidiyaalerratti taasisaa ture cimaatu ture. Gaazexeesitootaafis yeroo gaarii hin turre" jedhan.
Waggootni bara faranjootaa 2012 hanga 2017 jiran immoo miidiyaalef yeroo callisuu ture jedhan. Barootni 2018 fi 2019 immoo bara miirri fi dadamaqiinsi miidiyaa haaraa itti uummame akka ta'e himan.
Gama biraatin yeroo ammaatti miidiyaalen Itoophiyaa harki caalmaan magaalota keessattuu magaala Finfinnee irratti kan xiyyeefatan akka ta'e dubbatan.
Gama koorniyaatiinis miidiyaaleen biyyattii dhiirolin kan to'ataman fi shoorri dubartootaas xiqqaa akka ta'e himan. "Gama qabiyyeetin miidiyaalen heddu walitti bu'iinsa irratti xiyyeefachuun gabaasu. Miidiyaalen hawwaasummaa immoo siyaasa fi diinagdee irratti harka caalmaan xiyyeefatu" jedhan.
"Duraan dhiibbaan mootummaa miidiyaalee irratti geesisaa ture olaanaa turulle ammas dhiibbaan mootummaa, gareelee fi namoota dhuunfaa olaanaa dha" jechuun himan.
Gama miidiyaaleetiinis rakkoon oduu madaalawaa dhiyeessuu fi dubbii hammeessuu akka jiru Dooktar Mulaatun himan. Kana malees miidiyaalen madda haasaawwan jibbiinsaa ta'uu isaanis dubbatan. Ilaalchi "nuyi" fi "isaan" jedhus miidiyaalee heddu biraa akka mul'atu himan.
Finfinnee: Marii barsiisotaafi 'Puush Aappii' Dr. Abiy
Kiristaanoo Roonaaldoo taphataa jalqabaa galchii 800 lakkoofsise tahe
Waraanni waloo osoo hin ijiraamiin filannoon hin jiraatu- Riik Maachaar